Sonoma काउन्टी मानव अधिकार दृश्यता परियोजना Survey
Sonoma काउन्टी मानव अधिकार दृश्यता परियोजना
कृपया प्रत्येक घटनालाई छुट्टै रिपोर्ट गर्नुहोस् र सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। तपाईं आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै उत्तरहरू गोप्य छन् र हामी र हाम्रा सहयोगी साझेदारहरूले कोभिड १ during को बखत र सोनोमा काउन्टीमा मानवअधिकार घटनाहरू र मुद्दाहरूको अनुगमन गर्न अनुमति दिनेछ।
हामी तपाइँको पहिचान जानकारी कुनै पनि व्यक्तिगत वा तेस्रो पक्ष संग स्थानीय,
राज्य र संघीय कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू। हामी स Son्कलित तथ्यांकलाई आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गर्न र तथ्याical्कगत जानकारी रिपोर्ट गर्न सबै सोनोमा काउन्टी निवासीहरूको मानव अधिकार र मर्यादा सुधार गर्न प्रयोग गर्नेछौं।
दुर्भाग्यवस, हामी सबमिशनहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौं। यदि कुरा तत्काल छ भने, कृपया9C ११ मा कल गर्नुहोस्।
* 1. तपाई कसका लागि रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ?
मसँग भएको घटनालाई रिपोर्ट गर्दै छु।
म एक घटना रिपोर्ट गर्दै छु जुन मैले देखेको छु।
म कसैको लागि घटना रिपोर्ट गर्दै छु जो आफ्नै रिपोर्ट बनाउन असमर्थ छ।
* 2. कृपया तपाईंको जातीयता वा व्यक्ति तपाईंले रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ संकेत गर्नुहोस् (लागू हुने सबै जाँच गर्नुहोस्):
काला वा अिफ्रकन अमे􀄯रकन
हिस्पैनिक वा ल्याटिनिक्स
एशियाई वा एशियाई अमेरिकी
कृपया तपाइँको सांस्कृतिक पहिचान निर्दिष्ट गर्नुहोस् (जस्तै, इरिट्रियन, फिलिपिनो, ग्वाटेमेलान, ईरानी, कोरियाली, आदि)
* 3. कृपया तपाइँको लि gender्ग र / वा लि gender्ग पहिचान संकेत गर्नुहोस् (लागू हुने सबै जाँच गर्नुहोस्):
* 4. कृपया तपाईको उमेर दर्साउनुहोस्
१ Under बर्ष मुनिका
* 5. कृपया सूचित गर्नुहोस् यदि यी मध्ये कुनै पनि परिस्थितिले तपाईंलाई वा ब्यक्तिलाई वर्णन गरिरहेको छ भने (लागू हुने सबै जाँच गर्नुहोस्):
म एक DACA प्राप्तकर्ता हुँ
म खेताला हुँ
म घरबारविहीनताको अनुभव गर्दैछु
म LGBTQ + समुदायको एक सदस्य हुँ
म अशक्त व्यक्ति हुँ
म undocumented हो
* 6. घटनाको मिति
* 7. घटनाको स्थान
कानून प्रवर्तन सडक गस्ती
कानून प्रवर्तन यातायात रोक्नुहोस्
रोजगार को ठाउँ
आवासीय हेरचाह घर
* 8. कृपया ड्रप डाउन ट्याब अन्तर्गत एउटा विषय छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको मानव अधिकार घटनाको उत्तम वर्णन गर्दछ:
आपराधिक न्याय प्रणाली शिक्षा रोजगार र श्रम परिवार अदालत खाद्य असुरक्षा स्वास्थ्य हेरचाह बेघर आवास अध्यागमन Incarceration कानुन कार्यान्वयन LGBTQ + अधिकार मानसिक स्वास्थ्य अशक्त मानिस व्यक्तिगत सुरक्षा जातिवाद र क्सीनोफोबिया